KloiGoogle, qhagamshela uGoogle ngenkqubo yakho ye-GIS-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/KloiGoogle, qhagamshela Google nenkqubo yakho GIS
ArcGIS-ESRIGeospatial - GISGoogle umhlaba / imephuMicrostation-Bentley
Le sicelo sihamba ngaphaya kwezinto ezilula, kodwa ekusebenziseni isisombululo esikufunayo sonke sifanele sibe njengolulula:
Kwicala leeMaphu zikaGoogle —–>
Uluhlu lwesigxina Ngalolu caleni inkqubo yam ye-GISArcGIS
Microstation Bentley Imephu
Kwimzuzwana ndicinga ukuba yinto efana nento eyenzayo Plex.Earth nge-AutoCAD, akufani noko i-AutoDesk Civil 3D yenzayo, kwaye ayilayithwanga ne-Microstation V8i ithuluzi. Ngokungafaniyo, oku akuyi kuzisa into engenakwenzeka ukuvuselela, kodwa kunokuba iphakamisa inkonzo kunye nokuhlelwa kokuhlaziywa kwindlela entsha.
Yabona, kule meko iyangqamanisa nendlela endinayo yolwahlulo olupheleleyo. Oku kufana nokuthatha umfanekiso weskrini.
Kodwa xa uhamba, umfanekiso uboniswa njengobungakanani bamaphikseli abanjwe ngumlindo kwi-1024 × 768.
Ngokucindezela inkinobho yeGoogle, ihlaziywa kwaye ndinomboniso omtsha ngokungathi ndidibene ngqo kwiGoogle Maps.
Iyasebenza nje. Into eyenzayo kukuba kumboniso ngamnye, ibala embindini webhokisi, ithathela ingqalelo ipharamitha yokhetho esiyikhethileyo emva koko iye kwi-ActiveX kwaye ithathe umjelo kaGoogle kwaye iwuzise njenge-raster.
Ibha engqambileyo ineenketho ezahlukeneyo, kulo mzekelo ndibabonisa kwi-Microstation.
Phakathi kwezinye iindlela, ungakhetha indawo ye-UTM esisebenza kuyo.
Kwakhona uhlobo lokuthunyelwa, oluya kuba ngumfanekiso weSpeyinti, iimephu, i-hybrid kunye nebalazwe yezobugcisa.
Inokhetho olongezelelekileyo, apho inokuhlaziywa khona ngokuzenzekelayo, iqaphela inqanaba lendlela kaGoogle kwendlela yethu. Emva koko ukhethe ubungakanani bokubamba kwiiphikseli kwaye ekugqibeleni kwiqhosha lomlingo elihlaziya; Ngale nto kunokwenzeka ukuba sifumane imiboniso ebalulekileyo ukuba siqhagamshelene neGoogle Earth Pro kwindawo enkulu yokusondeza kwaye emva koko siyigcine njengemigangatho yendawo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, isebenza ngeArcGIS, iMapinfo, iGeoMedia kunye neMicrostation. Kubonakala ngathi kukuqhubela phambili okukhulu ekusebenzeni noGoogle Earth. Akukho nkxaso okwangoku kwi-AutoCAD, onokuyisebenzisa Plex.Earth nangona ba thembisa ukwenza njalo kwikamva.
Ndikhumbula ndibona aba bafana baseDenmark bebonisa into eAmsterdam kunyaka ophelileyo. Ngale nto ndiyathemba ukubona enye into, kuba ngaphandle kwento endiyibonisileyo banazo nezinye izisombululo abajolise kuzo kwi-GIS4mobile.
DAVID TROCHE uthi:
Kwisiza yile imeyile yoqhagamshelwano. Ayikwazi ukulayishwa ukuba ayithengi.
Injani le nkqubo ekhutshwe ???
Ukungalungi, akusebenzi kunye ne-gvSIG